कोरोना कहर...,स्वास्थ्य सुरक्षामा देखिदैन गाम्र्भीयता - Pradesh Today कोरोना कहर...,स्वास्थ्य सुरक्षामा देखिदैन गाम्र्भीयता - Pradesh Today
कोरोना कहर…,स्वास्थ्य सुरक्षामा देखिदैन गाम्र्भीयता
दाङ,३१ भदौ । दाङका समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा आम नागरिकहरूको भने स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् । समुदायस्तरमा तेस्रो चरणमा कोरोना प्रवेश गरिसक्दा पनि सुरक्षा कायमभन्दा लापरबाही बढिरहेको छ ।
घरमै बसेका र कसैको सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि नागरिकहरू यस विषयमा संयमित बन्न सकेका छैनन् । कोरोना भाइरसको महामारी समुदायमा फैलिसक्दा पनि नागरिकहरू सुरक्षा सावधानीमा देखिदैन । सचेत बन्न सकेका छैनन् । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सुरक्षा सावधानीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो ।
बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएसँगै बजार, यातायात, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूमा नागरिकहरू भिडभाड र लापरबाही अझ बढी देखिएको छ । नागरिकहरूमा सरकारको अनुरोध र निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि नागरिकहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
बढ्दो रूपमा समुदायमा कोरोना पुगे पनि नागरिकहरू भने स्वास्थ्यमा गम्भीर नदेखिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भाष्करराज गौतमले बताए । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीका बारेमा जानकारी गराउँदै आएको भएपनि प्रतिदिन लापरबाही बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।
महामारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण नागरिकको व्यवहार र आचरणमा भरपर्ने भएकाले सबैले स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामी जतिधेरै संवेदनशील बन्छौँ, त्यति चाँडै कोरोना भाइरसको नियन्त्रण हुन्छ’ उनले भने ‘तर हामीले नै स्वास्थ्यमा मापदण्ड पालना गरेनौँ भने कसरी नियन्त्रण कसरी सम्भव हुन्छ ?’ तर लकडाउन खुकुलो पार्दैमा कोरोना महामारीको अन्त्य नहुने उनले जानकारी गराए ।
‘जनविश्वासको आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाईएको हो’ उनले भने ‘कोरोनासँगको साझा लडाईमा जनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ, त्यसैले उच्च सर्तकता अपनाउन मेरो अनुरोध छ ।’
सरकारकै नीतिमा रहेर बारम्बार सुरक्षा सावधानीका बारेमा जानकारी गराउने, नागरिकलाई सचेत बनाउने, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्सलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने.गराउने, सामाजिक दुरी कायम गर्न लागाउने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि अटेरी गर्ने बानीको अन्त्य नभएको उनको भनाई छ ।
आम नागरिकले सरकारको अनुरोध अनुसार सुरक्षा सावधानी अपनाएमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नसक्ने उनी बताउँछन् ।
जिल्लाका विभिन्न समुदाय–स्तरमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव बढ्दै जाँदा पनि नागरिकहरूमा भने चरम लापरबाही देखिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले बताए । यदि समयमै नागरिक सचेत बन्न सकेमा कोरोना नियन्त्रण सम्भव रहेको उनको भनाई छ ।
उनले मान्छेलाई घरभित्रै राखेर रोगलाई रोक्न नकिने भएकाले सवाधानी अपनाउँदै अबको अवस्थालाई सामान्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
कोरोना नियन्त्रण हुने वा नहुने कुरा नागरिकको ब्यवहारमा भरपर्ने भएकाले लापरबाही नगर्न अनुरोध गरेका छन् । कुनैपनि रोगसँग सामना गर्न सिक्नुपर्ने बताउँदै उनले डर त्रासले नभई स्वास्थ्य सुरक्षाले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
‘हामी डराएर, घरभित्रै बसेर यो महामारी नियन्त्रण हुँदैन’ उनले भने ‘नियन्त्रण गर्ने हो, सामान्य अवस्थामा आउने हो भने सबैभन्दा पहिले व्यवहार परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।’ प्रत्येक नागरिक आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हैसियतमा रहेकाले हरेक व्यक्तिको सावधानीमा रोग नियन्त्रण हुने उनको भनाई छ ।
सुरक्षा सावधानी अपनाउन नागरिकहरूलाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको भएपनि प्रशासनको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्ने गरेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । संक्रमणको दर प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, जथाभावी सवारी साधन चलाउने, मास्क नै प्रयोग नगर्ने जस्ता लापरबाहीहरू बढ्दै गईरहेको भन्दै लापरबाही बढे कारवाही गर्ने बताए ।
‘प्रशासनसँग नडराएको हो की ? कोरोना संक्रमण फैलिदैन भन्ने लागेको हो कि ? केही बुझ्न सकिएको छैन’ उनले भने– ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कारबाही हामीले गर्दै आएको छौँ, तर नागरिकले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।’
लापरबाही नरोकिएमा समुदायस्तमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भयावह बन्दै जानसक्ने छ । प्रशासनको निर्देशन उल्लंघन गर्दै हिड्नेहरूलाई कारवाहीसमेत गर्दै आएको जानकारी गराए । नागरिकले चरम लापरबाही गर्ने गरेको भएपनि प्रशासनको तर्फबाट कुनैपनि लापरबाही नभएको उनको दाबी छ ।
निरासामा टरिगाउँ एयरपोर्ट
नायब सुब्वा भ्रष्टाचारमा बढी संलग्न
साउन ०५, २०७६
अधिकांश व्यवसाय दर्ता बिना सञ्चालन
कर्मठ सहकारी संस्था आफ्नै भवनमा
चैत ०१, २०७५